October 2019 - Ukali Orali
दुरुपयोगबाट साइबर क्रा*इमका घ*टना बढ्ने गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले केही विशेष कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा के के कुरामा ध्यान दिने ? – सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने एकाउन्टहरुको पासवर्डमा अङ्क, अक्षर र संकेत शब्दहरु समेत मिलाएर प्रयोग गरौं । सिधा अक्षको ठाउँमा… Read More »
काठमाडौँ – तीनमहिने सुइ । अर्थात एक पटक लगाएपछि ३ महिनासम्म गर्व नबस्ने परिवार नियोजनको अस्थाई साधन । नेपालमा पनि यो सुइ प्रयोग गर्नेहरुको संख्या ठुलो छ । नेपालमा संगीनी नामको तीन महिने सुइ विक्री वितरण गर्ने कम्पनी नेपाल सीआरएस कम्पनीका अनुसार नेपालमा ६६ लाख भन्दा बढी संगीनी सुइ विक्री भइसकेको छ । तर तीनमहिने… Read More »
काठमाडौं / मौलिक लोक गायन रियालिटि शो आइएम ई नेपाल लोक स्टनारको फिनाले यहि कार्तिक ८ गते हुनगइरहेको छ । ३२ अौं श्रृङखलाबाट टप चारमा आईपुगेका प्रतिस्पर्धिहरु रोल्पाका शनि विश्वकर्मा, स्याङ्जाका चेतन गोतामे, रामेछापका राम कुमार नेपाली र उदयपुरका विनोद दनुवार पहिलो लोक स्टार बन्ने होडमा छन् । काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमार्गमा ग्रान्ड फिनाले हुनेछ ।… Read More »
झिलिमिली तिहार बत्तिको नो टेन्सन ! कुलमान आफैँ खट्ने
काठमाडौँ । ‘झिलिमिली’को चाड भनेर चिनिने तिहार नजिकिएको छ । अबको केही दिनमै तिहारले छपक्क छोप्दै छ । तिहारमा सबैतिर झिलिमिली बत्ती बाल्ने गरिन्छ । परम्परागत दीयो, दियालो र मैनबत्तीले घरआँगन सजाउने परम्परा भए पनि पछिल्लो समय बढ्दो आधुनिकतासँगै हाम्रो संस्कृतिमा समेत बदलाव आएको छ । अहिले तिहारमा परम्परागत दीयो, दियालोभन्दा पनि आधुनिक बत्तीहरुको प्रयोग… Read More »
पुर्व राजा बि’रेन्द्रसंग संगै हिड्ने ९० ब’र्षिय हजुरबुवा, ऋ’ण राजा वि’रेन्द्रले तिरिदिएका थिए, बि’रेन्द्रले गरेका कुरा सम्झेर भावुक बने (भिडियो) पूर्व रा’जपरिवारको दु’खद अ’न्त्य भएको धेरै वर्ष भ’इसक्यो । तर त्यो घ’टनाको वा’स्तविकमा अहिले सम्म वाहिर आएको छैन । घ’टनाका बारेमा विभिन्न अ’ड्कलवाजी ग’रिएका छन् । क’हिले काँ’ही रा’जपरिवारसंग जो’डिएका विभिन्न पात्रका बा’रेमा चर्चा हुने… Read More »
एजेन्सी— यदि तपाईँको मुटुमा केही सम’स्या आयो भने के पहिले यसबारे थाहा होला ? सबैलाई थाहा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर, केही स’मस्याहरूबारे चाहिँ पहिले नै थाहा पाउन सकेमा राम्रो हुन्छ । किन पनि भने यसले मुटुलाई कस्तो अ’सर गरिरहेको छ भन्ने जानकारी दिन्छ र हामीले समयमा नै चेक अप गर्न सक्छौँ । मुटुसम्बन्धी… Read More »
मान्छेहरु मुठी भरी नून बोकेर घुमी रहन्छन्, तेसैले घाऊहरु लुकाएर हिंडेकोछुँ – हिमानी शाह
काठमाडौं / हीमानी शाह नेपालकी पूर्व युवराज्ञी हुन् । पूर्व युवराज पारस शाहकी श्रीमती हिमानी भारतको राजस्थानको सिकरका पूर्व सूर्यबंशी राजकूलका राजा बिक्रम सिंह र रानी बिपुला सिंहकी छोरी हुन्। यिनको तत्कालिन शाहज्यादा पारस सँग विवाह भएको थियो। हाल विभिन्न सामाजिक कृयाकलापमा संलग्न हिमानी छोरा हृदयेन्द्र शाह, र छोरीहरू पूर्णिका शाह, एवं कृतिका शाहलाई साथमा… Read More »
अहिले निकै भाइरल भएका अघोरी बाबालाई नचिन्ने सायदै कोहि होलान् । उनी कहिले के कारणले त कहिले के कारणले चर्चामा आइरहेका छन् । अहिले भर्खरै उनले एक महिलासंग बिहे गरेका छन् । सुन्दरीजलस्थित अघोरी बाबाको कुटीमा संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै उनले आफूले नयाँ जीवन को थालनी गर्न लागेको बताएका छन् । ठुला ठुला ऋषिमुनिहरुले समेत बिहे गरेको बताउदै आफुले पनि… Read More »
एउटी अबोध कलिली बालिकाले कमाएर घरपरिवार पाल्छिन् भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर बास्तबमै ९ वर्षीय बालिकाले आफ्नो आमा बचाउन काम गर्दै र आफु पनि पढ्दैछिन् । यति सानै उमेरमा आफ्नो आमाको लागि यति धेरै दुख गरि बसन्तपुर क्षेत्रमा पानि बेच्ने काम गर्छिन् अर्चना पराजुली । उनि अहिले कक्षा ३ मा पढ़छिन । पढाईमा पनि… Read More »
श्री बाग्लुंग कालिका मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस्
मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहने योग रहेकोछ । मान्यजनको स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । गरीरहेको कार्यका श्रेत्रमा सामान्य ढिलाईको सम्भावना रहेकोछ । सवारी साधनको प्रयोगमा साबधानी अपनाउनु पर्नेछ । जिवन साथीको सहयोगमा जटिल कार्य सम्पादीत रहनेछन । बृष… Read More »